चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँधलाई ब’म प’ड्काएर उ’डाइदियो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँधलाई ब’म प’ड्काएर उ’डाइदियो !
काठमाडौं। चीनका अधिकारीहरुले मध्य चीनको एक बाँधलाई ब’म प’ड्काएर उ’डाइदिएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको यो बाँ’धलाई आइतबार वि’ष्फोट गरेर उ’डाइएको हो । बाँ’धले पानी थुन्दा डु’बान बढ्दै गएपछि पानी खोल्नको लागि बाँ’धमा वि’ष्फोट गराइएको हो ।
चीनमा डु’बानका कारण सय भन्दा धेरैको मृ’त्यु भइसकेको छ । चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीलाई उ’द्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी एपीले जनाएअनुसार यां’ग्त्जी नदीको सहायक चुही नदीमा बनेको विशाल बाँ’धलाई वि’ष्फोट गरेर उ’डाइएको हो ।
यो वि’ष्फोटपछि नदीको ज’लस्तर २ फिटभन्दा अ’धिक घ’ट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अविरल वर्षाका कारण चीनमा यां’ग्त्जीसहितका नदीहरुको ज’लस्तर असामान्य रुपले बढेको छ । गत हप्ता यांग्’त्जी नदीमा बनेका तीन बाँधको फ्ल’डगेट खो’लिएको थियो किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो यो बाँ’धको जलस्तर १५ मिटरभन्दा अ’धिक ब’ढेको थियो ।
गत हप्ता त्यहाँका अधिकारीहरुले वर्षाका कारण १४० भन्दा धेरै मानिसहरु म’रेको वा बे’पत्ता भएको बताएका थिए । अविरल वर्षा र बा’ढीले चीनमा ३८ लाख नागरिक नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । २ लाख २४ हजारभन्दा धेरै वि’स्थापित भएका छन् ।डीसी नेपाल
उत्तर कोरियाद्वा`रा अन्तर–कोरियाली सम्पर्क कार्यालय ध्व`स्त !!